Indlela yokusebenzisa i-NORM.INV Umsebenzi kwi-Excel
Izibalo zesitatisti zichithwa kakhulu kunye nokusetyenziswa kwesofthiwe. Enye indlela yokwenza ezi zibalo kukusebenzisa iMicrosoft Excel. Kwimiba eyahlukileyo kunye nokunokwenzeka oku no kwenziwa kwiprogram ye-spreadsheet, siya kuqwalasela umsebenzi we-NORM.INV.
Masithi sithi sineendlela eziqhelekileyo zokusabalalisa ngokungafaniyo ezichazwe x . Omnye umbuzo onokubuzwa ngukuthi, "Yiyiphi inzuzo ye- x esinayo i-10% engezantsi yokwabiwa?" Amanyathelo esiza kuphumelela kulolu hlobo lwenkinga yile:
Ukusebenzisa ithala eliqhelekileyo lokusabalalisa itafile , fumana iinqanaba elihambayo elihambelana ne-10% ephantsi yokusabalalisa.
Sebenzisa ifom ye - z -score , kwaye uyisombululo x . Oku kusinika x = μ + z σ, apho μ yintsipho yokusasazwa kwaye σ ukuphambuka okuqhelekileyo.
Fakela zonke ixabiso lethu kwi-formula engenhla. Oku kusinika impendulo.
Ku-Excel umsebenzi we-NORM.INV wenza konke oku kithi.
Ukusebenzisa lo msebenzi, vele uthayiphe okulandelayo kwisitenki esingenalutho: = NORM.INV (
Iingxoxo zalo msebenzi, ngokulandelelana zi:
Ubunokwenzeka - oku kulandelelanisa inani lokusabalalisa, elihambelana nommandla kwicala lasekhohlo lokusabalalisa.
Kuthetha - oku kuboniswe ngasentla ngu-μ, kwaye liziko lokuhambisa kwethu.
Ukuphambuka okuMgangatho - oku kwachazwa ngasentla ngu σ, kwaye i-akhawunti isasazeka ukusasazwa kwethu.
Ngenisa nje enye yezi ngxabano kunye ne-comma eyahlula.
Emva kokuba ukuphambuka okusemgangathweni kufakwe, vala abazali bababini kunye) kwaye cinezela ukhiye wokungena. Isiphumo eseli selona lixabiso le x elihambelana nenani lethu.
Siza kubona indlela yokusebenzisa lo msebenzi ngemibalwa embalwa yokubala. Kuzo zonke ezi siza kuthatha ukuba i-IQ iqhelekileyo isasazwa ngentsingiselo ye-100 kunye nokuphambuka okuqhelekileyo kwe-15.
Imibuzo esiya kuphendula ngayo:
Yiyiphi intlobo yemilinganiselo ye-10% ephantsi kwezo zonke izikolo ze-IQ?
Yiyiphi intlobo yexabiso lezona ziphezulu ze-1% zazo zonke izikolo ze-IQ?
Yiyiphi intlobo yemilinganiselo ye-50% phakathi kwama-IQ amanqaku?
Umbuzo 1 esiya kuwo = NORM.INV (.1,100,15). Imveliso evela kwi-Excel i malunga nama-80.78. Oku kuthetha ukuba amanqaku angaphantsi okanye alingana no-80.78 aquka i-10% ephantsi kwezo zonke izikolo ze-IQ.
Umbuzo wesi-2 kufuneka sicinge ngethuba elingaphambi kokusebenzisa umsebenzi. Umsebenzi we-NORM.INV wenzelwe ukusebenza kunye nesabelo esisekhohlo sokwabiwa kwethu. Xa sibuza malunga nomlinganiselo ophezulu sibheke kwicala lasekunene.
I-1% ephezulu ilingana nokubuza malunga ne-99% engaphantsi. Sifaka = NORM.INV (.99,100,15). Imveliso evela kwi-Excel i malunga ne-134.90. Oku kuthetha ukuba amanqaku amakhulu kunokuba alingana no-134.9 aquka i-1% ephezulu yazo zonke izikolo ze-IQ.
Umbuzo wesi-3 kufuneka ube mkhono ngakumbi. Siyaqonda ukuba i-50% ephakathi ifunyenwe xa singabandakanyi i-25% engaphantsi kunye ne-25% ephezulu.
Ngaphantsi kwe-25% esifakayo = NORM.INV (.25,100,15) kwaye ufumane 89.88.
I-25% ephezulu esifakayo: NORM.INV (.75, 100, 15) kwaye ufumane i-110.12
Ukuba sisebenzisana kuphela neemeko eziqhelekileyo eziqhelekileyo, ngoko umsebenzi we-NORM.S.INV usebenza ngokukhawuleza.
Ngalo msebenzi, ithetha ihlala i-0 njalo kwaye ukuphambuka okuqhelekileyo kusekho njalo 1. Ingxabano kuphela yinto enokwenzeka.
Ukuqhagamshelana phakathi kwezi zinto zibini:
NORM.INV (Ubunokwenzeka, 0, 1) = NORM.S.INV (Ubunokwenzeka)
Kukho nawuphi na umrhumo oqhelekileyo kufuneka sisebenzise umsebenzi we-NORM.INV.
Iimidlalo zeKhadi leCandelo leMvana
I-Belaying yiSakhono esiPhambili sokuHlola
Izifundo zokuBakhuthaza abafundi
Imbali ye-Sacco ne-Vanzetti Case
Iiprafu eziSiseko zoBume: i-Sphere
Biography kaCass Gilbert
Uluphi umcebisi weZikhokelo?
Iimfesi zeTrama zeNsimbi kunye namaxabiso
Amaqiniso Ngeprotheni yeFluorescent ehlaza
Iimoto zesebe zeLexus kunye nezithuthi zeCrossover
Isihloko Esiqhelekileyo Sothando ku-Shakespeare's Plays
Amadoda ase-US angamaNtshontsho ahlamba abafazi kwi-Intanethi
Iimpawu eziqhayisayo malunga namaxesha
I-Curtis Cup: I-Biennial Golf Match Phakathi kwama-USA-GB & I Amaqela
Indlela yokwenza i-Classic Chemical Volcano - Vesuvius Fire
I-Majoring kwiZimashishini zamazwe ngamazwe
Ubuluya kwi-Middle Ages